I-Semalt Expert: I-Google's Search Algorithm ingaba Iphosakele Abantu Kugaxekile
Uchwepheshe ngamnye we-SEO, umshicileli okanye umlobi womxholo uyazi ukuba ukudibanisa isakhiwo enye yezinto ezibalulekileyo ezichaphazela indawo kwindawo injini yokukhangela . I-SEO idinga ukunxibelelana, kwaye abantu abajongene ne-SEO bafuna nabo.
Kodwa ii-injini ze-search, ngakumbi iGoogle, zibonakala zifuna ukudibanisa kakhulu kwaye oku kubangela ingozi ngaphezu kokulungileyo - long term health care insurance policy ratings. Iilgorithm zokukhangela zeGoogle zisebenzisa izixhumanisi njengetriki ehambelana neendawo zokubeka indawo. Oku kuye kwenza isihloko sokuqhagamshelana kwekhonkco sivelele kwiiforamu ezahlukeneyo. Abalobi, ii-bloggers kunye nabamemezeli bahlala befuna iindlela ezintsha zokufumana iinqononongo ukuqinisekisa ukuba umxholo wabo umele ithuba elihle lokufikelela kubaphulaphuli babo.
UMichael Brown, uMphathi wePlayer of Success Semalt , uchaza ukuba ubunzima obunikwe ekunxibelelaneni xa kusetyenziswe amasayithi kubonakala kubangela ezinye iimetrikhi zokubaluleka ezibaluleke kakhulu. Kuyabonakala ngoku ukuba ugxininiso lweGoogle kumxholo wekhwalithi, igunya lovimba, kunye nempembelelo njengezigqibo eziphambili zendawo ye-site zizibango nje. I-algorithms yayo yokukhangela iyayigatya ngokupheleleyo le miba ngokuphathelele izixhumanisi.
Ngenxa yoko, unxibelelwano lwabakhi abakhawuleza bajonga ngokukhawuleza kwiindawo zokutshala iinjongo ekudaleni umxholo onomgangatho onamandla kunye negunya..
Abathengi babandezeleka kakhulu kule shishini. Esikhundleni sokufumana umxholo onobuncedo njengoko bekulindelwe kwiziza ezibekwe kwikhasi lokuqala lemiphumo ye-injini yokusesha, oko bafumanayo ngumxholo ongaqhelekanga oye waqhutyelwa usebenzisa ikhonkco ukuya kwizinga eliphezulu.
Kuxeka ukuba i-Google igxininise kakhulu kwiinkcukacha eziye zakhupha ukuphuhliswa kwengcamango yokuba into eninzi ekhoyo kwiwebhu ingalawulwa ngumdali. Yilo mqondo oye waqhubela phambili abantu abangakumbi kwizixhumanisi zogaxekile ngokuthemba ukuba umxholo wabo uya kubaluleka.
Ukuba iinjini zophando zibeka ubunzima obuncinci kwiinqununu xa ziphucula izilungiso zazo zokukhangela, wonke umdali wendalo unokunamathela kwizinto ezisiseko ze-SEO. Baya kuba neengxaki malunga nokuyila iiwebhusayithi zabo nokudala umxholo wabo kumgangatho ogqwesileyo ukuze abathengi bafumane oko bakufunayo kulawo masayithi. Oku kuya kwenza abathengi bathembele kwiindawo ezinjalo. Ngokuqinisekileyo, akukho mntu angathanda ukulibala malunga nesakhiwo soqhagamshelwano. Kodwa emva kokunyamekela iinkalo eziphambili ze-SEO, akukho nto eya kuba lula kunokukhangela iziqulatho eziphezulu kwiziko. Ngamanye amagama, isayithi iya kuthandwa ngokuba iyabonakala.
Njengoko imi ngoku, i-Google ivumela iindawo ukuba zisebenzise izixhumanisi zokunyanzela abantu ukuba bathande. Ngokudabukisayo, nakwiindawo ezinkulu zenza le nto engamkelekanga, kwaye enye ishiywe ibuza ukuba kutheni i-Google ibenza bahambe nayo.
Ukuba ingxaki yezonxibelelwano ze-spammy ukufumana isisombululo, i-Google kufuneka ibe phakathi kwayo. Kufuneka uyeke ukunika amanxibelelwano amaninzi kakhulu kwi-algorithm yayo yokubala kwaye ugxininise kwimibandela ebalulekileyo yomxholo we-intanethi: okuyingqayizivele, ubuchule, impembelelo kunye negunya. Iinjongo zophando kufuneka zenzele iqondo lomhlaba - ukuvumela iiwebhusayithi ukuba zikhuphisane ngokubhekiselele kumgangatho womxholo wazo kunye nokuba zizinyamekela njani iimfuno zabathengi. Ngaphandle kokuba oku kwenzekayo, abantu abaninzi baya kuphuhlisa umbono wokuba ikhonkco liyinkosi ye-SERP kwaye kwaye iya kukhulisa kuphela inani lezinto ezingenalusizo kwiwebhu, njengoko sele zibonwe.